Mayelana NATHI - TACHYON Khanyisa
TACHYON kuyinto ezintsha High Power LED Lighting Umkhiqizi kusukela 2005. Sinazo ubuchwepheshe cutting edge njengoba sikubheke kakhulu R&D ithimba by imali kakhulu ekuthuthukiseni izinga yokukhanya & ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo. Onjiniyela bethu kuyoyixazulula izinkinga zakho lobuchwepheshe & ukukunikeza professional DIALux sekulingisa imibiko. Ukuqamba Inspiring & Ukuphelela Ukuphikelela ekusebenziseni Ukukhanyisa Ukusebenza kukhona izimiso zethu eziwumongo kanye.
Sinikeza ephezulu LED Ezemidlalo Ukukhanya Stadium & Arena, Elikhulu Area Flood Ukukhanya Port & amasayithi ukwakhiwa, Street Ukukhanya Emikhulu & Bridges, RGB Wall Washer ngoba Accent Lighting, Hard Khanyisa & Khanyisa Soft ukuqopha. Imikhiqizo yethu ukuthola ETL & UL isitifiketi-US, EC & TUV Europe, kanye RoHS.
Ngezinye TACHYON, usangakwazi ukuthenga best High Power LED Lighting izixazululo yamaphrojekthi wakho.